अमेरिका नै झस्किनेगरि भीम रावलले सुरु गरे नयाँ अभियान, राष्ट्रघाती एमसीसी रोक्ने अभियानमा नेपाली जनताले साथ देलान त ? – Points Nepal
अमेरिका नै झस्किनेगरि भीम रावलले सुरु गरे नयाँ अभियान, राष्ट्रघाती एमसीसी रोक्ने अभियानमा नेपाली जनताले साथ देलान त ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष १२, २०७८ समय: ९:०५:१२
एमसीसी बिरुद्ध एमालेका लोकप्रिय नेता भीम रावलले चट्टानी अडानसहित नयाँ अभियानको थालनी गरेका छन् । उनले अभियानमा नेपाली जनताको साथको अपेक्षा गरेका छन् । एमसीसीक रोक्नका लागी भीम रावललाई जनताको साथको खाचो भएकाले उनले जनताको साथ पाउँनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता भिम रावल अमेरिकी सहयोग नियोग कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने अडानमा शुरु देखि नै उभिदै आएका थिए । उनको चट्टानी अडान अहिलेपनि उस्तै छ ।
तर अब भने एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै एकमत देखिएपछि रावलले अन्तिम अस्त्र फालेका छन् । उनको पक्षमा सिंगो देश उभिएको छ ।
रावलले कुनै पनि देशभक्त नेपाली एमसीसीको पक्षमा लाग्न नसक्ने भन्दै एमसीसीको समर्थनमा लाग्नेहरु सबै विदेशीको दलाल हुन् भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
Last Updated on: December 27th, 2021 at 9:05 am